एउटा अालुकाे मूल्य ११ कराेड रुपैयाँ !
Home विश्व-कृषि एउटा अालुकाे मूल्य ११ कराेड रुपैयाँ !
तपाईले कहिल्यै तरकारी पसलबाट आलु किन्नु भएको छ ? कहिल्यै मोलतोल गर्नु भएको छ ? यदि तपाईले खरिद गर्नु भएको छ भने यो जानकारी पाएपछि आगामी दिनमा आलु किन्नु भन्दा अगाडि सयौं पटक सोच्नु हुने छ ।
आलुका बारेमा आज हामी जुन जानकारी दिन गइरहेका छौं यसबारेमा थाहा पाएपछि तपाईको होश उढ्ने छ । यधपि हामी यस्तो आलुको बारेमा जानकारी दिइरहेका छौं जुन आलु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ तर खान सक्नु हुन्न । किनकी यो एउटा तस्वीर मात्रै हो ।
११ करोडमा आलुको चित्र
वास्तवमा, एक युरोपीयन व्यापारीले आलुको एउटा तस्वीर ११ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् । यो तस्वीर चर्चित आइरिश फोटोग्राफर लेन्समैन केविन अबाशले सन २०१० मा खिचेका थिए । र सोही वर्ष आलुको चित्र बनाए। केविन यस्ता पेन्टर हुन जसको एउटा पेन्टिङ १.५ लाख डलरमा बिक्री हुन्छन् ।
वाइन पिउदाँपिउदै तस्वीर खरिद
फोटोग्राफर केविन अवाशका अनुसार, ‘हामीले (केविन र व्यापारी) दुई गिलास वाइन पिएपछि उसले तस्वीर देखेर भन्यो, मलाई तस्वीर मन पर्यो । त्यसपछि हामीले फेरि दुई गिलास वाइन पियौं । उसले भन्यो ‘मलाई यो चाहियो’ वाइन पिउँदै हामीले सौदा गरियौं र दुई सातापछि यसको मूल्य तय गरियौं ।
केविनसँग आइरिश आवुको तीनवटा तस्वीर थिए । जसमध्य एउटा सर्बियाको चिडियानाखाना (म्यूजियम) लाई ‘दान’ दिए । एउटा उनको संग्रहमा छ र एउटा चाहीँ उनले बेनाम युरोपीयन व्यापारीलाई बेचें । यो पहिलो पटक नभएर उनका कयौं चित्र यस्तै महंगोमा बिक्री भएका न् ।
पोट्रेट फोटोग्राफीका लागि चर्चित केविन ?
व्यापारी र उच्चस्तरका प्रतिक निसकेका केविन आफ्नो ‘ब्लैक ड्रप’ पोट्रेट फोटोग्राफीका लागि प्रसिद्ध छन् । केविनले हलिउड स्टार जनी डेप्पको फोटो खिचेका थिए जुन निकै चर्चित बन्यो । यसैकारण केविनका चित्र लाखौं डलरमा बिक्री हुने गरेका छन् ।
Previous articleतुलसी एकादशीका दिन १० हजार तुलसीको बिरुवा बाँडिने
Next articleमर्स्याङ्दी नदीमा पानीको बहाव बढ्याे
नापाको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन सुरु